Tsamba yaJudha 1:1-25
1 Judha, muranda waJesu Kristu, asi ari munin’ina waJakobho.+ Kune vaya vakadanwa+ vanodiwa naMwari Baba uye vakachengetwa kuti vave vaJesu Kristu:+ 2 Wedzerwai tsitsi nerugare nerudo. 3 Vadiwa, kunyange zvazvo ndaiedza chaizvo kukunyorerai nezveruponeso rwatiinarwo tese,+ ndakaona zvakakodzera kuti ndikunyorerei ndichikukurudzirai kuti murwire zvakasimba kutenda+ kwakapiwa vatsvene kamwe chete kuti kurambe kuripo. 4 Chikonzero changu ndechekuti vamwe vanhu vakaverevedza vachipinda pakati penyu, vaya vakasarudzirwa mutongo uyu kare kare maererano neMagwaro; vanhu vacho havadi Mwari uye vanoshandisa nyasha dzaMwari wedu zvisiri izvo kuti vaite zvinhu zvakafumuka*+ uye vanoratidza kuti havana kutendeka kuna tenzi uye Ishe wedu mumwe chete, Jesu Kristu.+ 5 Kunyange zvazvo muchinyatsoziva zvinhu zvese izvi, ndinoda kukuyeuchidzai kuti pashure pekunge Jehovha* aponesa vanhu kubva munyika yeIjipiti,+ akazoparadza vaya vakanga vasingaratidzi kutenda.+ 6 Uye ngirozi dzisina kuchengeta nzvimbo yadzo yepakutanga, dziya dzakasiya nzvimbo yadzo yekugara yakakodzera,+ akadzichengeta murima gobvu dzakasungwa nekusingaperi kuti dzizotongwa pazuva guru.+ 7 Saizvozvowo, vanhu veSodhomu neGomora nemaguta akanga akapoteredza, vakanyura muupombwe* hwakanyanya, vachitevera zvido zvenyama zvinopesana nezvavakasikirwa.+ Kurangwa kwavakaitwa nemoto usingaperi kunoshanda seyambiro kwatiri.+ 8 Pasinei neizvi, vanhu ava vekuverevedza vachipinda pakati penyu vari kutorota zvavo, vachisvibisa nyama, vachizvidza vane simba, uye vachituka vanokudzwa.+ 9 Asi Mikaeri+ ngirozi huru+ paakapesana naDhiyabhorosi, achiitisana nharo naye nezvemutumbi waMozisi,+ haana kuona zvakakodzera kuti amutonge nemashoko ekutuka,+ asi akati: “Jehovha* ngaakutsiure.”+ 10 Asi vanhu ava vari kushora zvinhu zvese zvavasingatombonzwisisi.+ Uye pazvinhu zvese zvavanongozivawo nepfungwa dzavo semhuka dzisingafungi,+ vari kuramba vachizvisvibisa nezvinhu zvakadaro. 11 Vane nhamo, nekuti vakatevera nzira yaKaini+ uye vakamhanyira mugwara rekutadza raBharami+ kuti vawane mubayiro, uye vakaparara nemashoko ekupanduka+ aKora!+ 12 Ava ndivo matombo akahwanda pasi pemvura pamitambo yenyu*+ pavanenge vachidya nemi, ivo vafudzi vanodya vasingatyi;+ makore asina mvura anoendeswa kuno nekoko nemhepo;+ miti isingabereki michero mumwaka wainofanira kubereka, yakafa kaviri,* ikadzurwa; 13 ava ndivo mafungu egungwa anopenga ayo anopupuma furo renyadzi dzawo;+ nyeredzi dzisina gwara radzo; vakachengeterwa rima gobvu nekusingaperi.+ 14 Chokwadi, Inoki,+ uyo aiva wechinomwe kubva kuna Adhamu, akaprofitawo nezvavo paakati: “Inzwai! Jehovha* akauya nengirozi dzake tsvene dzakawanda chaizvo*+ 15 kuti aitire vese zvaakavatongera,+ uye kuti ape mhosva vese vasingadi Mwari pamusoro pemabasa avo ese ekusada Mwari avakaita vachipesana nezvinodiwa naMwari, uye pamusoro pezvinhu zvese zvinotovhundutsa zvaitaurwa pamusoro pake nevatadzi vasingadi Mwari.”+ 16 Vanhu ava vanogunun’una+ uye vanonyunyuta nezveupenyu hwavo, vachitevera mwoyo yavo,+ uye vanozvikudza zvakanyanya nemiromo yavo, vachibata vanhu kumeso* kuti vawane zvavanoda.+ 17 Asi imi vadiwa, yeukai mashoko akataurwa* nevaapostora vaShe wedu Jesu Kristu, 18 avaigara vachitaura kwamuri, vachiti: “Panguva yekupedzisira pachava nevaseki vanotevera mwoyo yavo inoda kuita zvisingafadzi Mwari.”+ 19 Ava ndivo vanopesanisa vanhu,+ uye vanoita semhuka;* havana mweya waMwari. 20 Asi imi vadiwa, zvivakei pakutenda kwenyu kutsvenetsvene, uye nyengeterai maererano nemweya mutsvene,+ 21 kuti murambe muri murudo rwaMwari,+ pamunenge muchimirira tsitsi dzaShe wedu Jesu Kristu muchifunga nezveupenyu husingaperi.+ 22 Uyewo, rambai muchinzwira tsitsi+ vamwe vasina chokwadi nezvavanotenda;+ 23 vaponesei+ kuburikidza nekuvabvuta mumoto. Asi rambai muchinzwira vamwe tsitsi, muchidaro nekutya, muchivenga kunyange nguo yakasvibiswa nenyama.+ 24 Kuna iye anokwanisa kukuchengetedzai kuti musawa uye anokwanisa kuita kuti mumire musina chamunopomerwa+ pamberi pekubwinya kwake nemufaro mukuru, 25 iye Mwari mumwe chete Muponesi wedu pachishandiswa Jesu Kristu Ishe wedu, ngakuve nekubwinya, neukuru, nesimba, nechiremera kubvira nekusingaperi, nazvino, kusvikira nekusingaperi. Ameni.
^ Kana kuti “zvinoratidza kushaya nyadzi.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti a·sel′gei·a. Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Tsika dzakafumuka.”
^ Kana kuti “pamitambo yenyu yerudo.”
^ Kana kuti “yakafa zvachose.”
^ Kana kuti “nemakumi ake ezviuru.”
^ Kana kuti “vachiyemura vanhu.”
^ Kana kuti “akagara ataurwa.”
^ Kana kuti “uye vanhu venyama.”